SIKHONA SIPHILE HANUKEII
Siyikho esikuphilayo futhi siphila ngalokho esiyikho. Hanukeii kunzima ukukuchaza kepha kulula ukuyiqonda uma uzizwa. Kungumuzwa ongachazeki, okwenza ububule ngaso leso sikhathi, lapho ekugcineni wazi ukuthi izinkathazo zakho zishiyiwe futhi uqala ukuzizwa ujabule ujabulela umzuzu omuhle.
Impilo engenazo izicathulo
Hanukeii yilowo muzwa owutholayo lapho ukhumula izicathulo, ugoqe ibhulukwe lakho uhambe ibanga elide olwandle. Yisikhathi lapho ukugijima, umsindo, ukucindezeleka nezinkathazo zakho ziphela ngemuva. Hanukeii Yiso nje leso sikhathi lapho uphefumula khona ukunambitheka kwempilo futhi. Isikhathi sakho.
Hanukeii Iyazwakala ezindaweni eziningi, kepha ukuhamba esihlabathini solwandle, ogwini ngqo, cishe akunakwenzeka ukuthi ungayizwa. Siyajabula, siyayithanda impilo, sithanda umbala futhi singabafuna isikhathi Hanukeii.
NGABE UFUNA UKUSUSA?
Yize sithanda umongo kanye neqiniso, sisesikhathini sedijithali ngakho-ke uma ufuna ukusithola, ungasithumela umlayezo ngaleli fomu futhi sizokuphendula ngokushesha okukhulu.
Izibuko ze Kailani
© 2021 Hanukeii. ® Wonke Amalungelo Agodliwe